ခင်မင်းဇော်: မကဒတ နှစ် ၂၀
Posted by ခင်မင်းဇော် at 3:45 AM
အမရေ ... တကယ်တော့ ကျောင်းသားတပ်မတော်က ရဲဘော် ရဲမေ တွေဟာလည်း တချိန်က ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ဖြစ်ခဲ့ကြသူတွေပါ ။ အခြေအနေအရ ဘောပင်ကိုင်ရမယ့်လက်တွေက သေနတ်တွေကို ပြောင်းကိုင်ဖို့ အများကြီး တွေးပြီး ၊ အများကြီး စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ကြည့်တတ်တဲ့သူ ခံစားတတ်တဲ့သူတွေ မြင်နိုင်ပါတယ် ။ အဲဒါနဲ့တင်ပဲ ညီမကတော့ သူတို့ကို လေးစားမိပါတယ် ။
အမပြောသလို လက်နက်ကိုင်တော်လှန်သူက တော်လှန် ၊ အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းနဲ့ တိုက်သူက တိုက် ၊ humanitarian ကိစ္စတွေမှာ လုပ်သူက လုပ် .. စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး လုပ်ကြမှာသာ မြန်မာနိုင်ငံတွက် မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်ရှိလာနိုင်မယ်လို့ အမြဲ ယုံကြည်နေမိပါတယ် ။
အနှစ် ၂၀ ပြည့်မှာ အကိုပီအေကြီးရဲ့ တပ်ရင်း (၈) နဲ့တကွ ကျောင်းသားတပ်မတော် တခုလုံး.. စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတာတွေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ် ။
we also respect those who give their life our country,we never forget.
တော်လှန်ရေးဆိုတာက ခေတ်စားတာကို ရွေးချယ်တာရလား.. ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် လိုအပ်တယ်ထင်တဲ့ ယုံကြည်ရာကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ကို ရွေးချယ်ကြရတာလား..ဆိုတာကို အဲဒီလူတွေကို ပြန်မေးလိုက်ချင်ပါတယ်..။ နိုင်ငံလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဘ၀တွေကို ပုံအောပေးဆပ်ပြီး ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုပ်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ မကဒတရဲဘော်အပေါင်းကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ အလေးပြုပါတယ်။
8888 ရှစ်လေးလုံးက မွေးဖွါးလာခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် နှစ်၂၀ပြည့် အမှတ်တရမှာ ပို့စ်ရေးသားသူရော ယခုအထိကော်မန့်ရေးသူများပါ ခေတ်သစ်ပထမမြန်မာအမျိုးသမီးများအဖြစ် ကျွန်တော် သတ်မှတ်ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ The Big Five ပေါ့ဗျာ။
မြန်မာအမျိုးသမီးထုရဲ့ သတ္တိကို လေးစားဂုဏ်ယူလျှက်ပါ။
မိမိတိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်ချက်အရ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ကို အစဉ်အမြဲ ဂုဏ်ယူလျက်ပါ...
ဘယ်သူဘာပြောပြော...မိမိ ယုံကြည်ရာ လုပ်နိုင်တာက အကောင်းဆုံးပါ...သမိုင်းက စကားပြော သက်သေပြပါလိမ့်မယ်... စေတနာမှန်ရင် ဘာလုပ်လုပ် အကုန်ကောင်းပါတယ်....
ကမ္ဘာတ၀ှမ်း၌ တခုတည်းသော ကျောင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ် ဖြစ်သည့် မြန်မာ နိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး - ABSDF ဖွဲ့စည်း ထူထောင်မှုသည် ယခုလ ၁ ရက်နေ့တွင် နှစ် ၂၀ ပြည့်မြောက်ခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင်လည်း ရန်ပုံငွေ အခက်အခဲ၊ အင်အားနှင့် နယ်မြေ အကျပ်အတည်းများ တည်ရှိနေသော်လည်း ယုံကြည်ထားသည့် လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကို ကိုင်စွဲကာ ကျောင်းသားတပ်မတော် ရဲဘော်များက မြန်မာ နိုင်ငံတွင် စစ်အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် သက်စွန့်ကြိုးပမ်း တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
ဖြေ။ လက်ရှိ ဖြစ်တည်နေတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဟာ ကျနော့်အမြင်မှာတော့ ကောင်းလာမယ့် အခြေအနေထက်၊ အဆိုးဘက်ကို ဦးတည်သွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေကို တွေ့နေရပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဘယ်လိုပဲ ကျနော်တို့တွေအနေနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေးကို ကြွေးကြော် တောင်းဆိုနေပေမယ့် နအဖ လုပ်နေတဲ့ ပုံစံက လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက်ကိုပဲ အတည်ဆုပ်ကိုင်ထားမယ်။ လာမယ့် အချိန်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီကိုလည်း ဖြုတ်ပစ်နိုင်တယ်၊ မတရားအသင်း ကြေညာပစ်နိုင်တယ်၊ အကြမ်းဖက် အသင်းအဖြစ်နဲ့လည်း စွပ်စွဲနိုင်တယ်။ အခုအချိန်မှာလည်း နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးထားတယ်။ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းဆီးထားတယ်။ နိုင်ငံရေး လုပ်မရအောင် ဖြစ်နေတဲ့ အခြေခံအောက်မှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေဟာ အကောင်းဘက်ကနေ အဆိုးဘက်ကို ဦးတည်သွားနိုင်တယ်။
(ဒီရေဘလော့မှာ တင်ထားတဲ့ မစ္ဖျိမသတင်းဌါနက ကိုသန်းထိုက်ဦးအင်တာဗျူးပါ)
ကျနော် ထင်တာကတော့ တချို့တွေဟာ သူတို့ စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးလာ ခဲ့ကြတာကို အပြစ်မရှိသလို မြင်လာကြအောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လိမ်တဲ့ အနေနဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် ကာကွယ် ပြောဆိုတဲ့ အနေနဲ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို ရှုတ်ချနေကြတာ လို့ပဲ မြင်မိပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်တာ ခေတ်မစားတော့ဘူးလို့ 
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေ လက်နက်အသစ်တွေ ဘာလို့ ထပ်ပြီး
တီထွင်နေလဲ...ဘာလို့ ထပ်ဖြန့် နေလဲ...။
ဘယ်တော့မှ မပျောက်ပျက်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်ပါ...။
သစ်သီးအတို့ အမြှုပ်နဲ့ အငတ်ခံတိုက်နေတဲ့ ၊အသက်စွန့် နေသူတွေကို ပြောမယ်ကြံရင်....
ငါးပိသုတ်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့် နဲ့ ပါးစပ်ကို ဆို့ ထားတာ ပိုကောင်းမယ်..။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်းသားတပ်မတော်ထဲ ပါခဲ့တဲ့သူတွေကို လေးစားတယ်။ အခု လက်ရှိ ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေကို ပိုလေးစားတယ်။ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ တင် သူတို့ ရဲ့စွန်လွတ်မှုတွေဟာ ပြောမပြနိုင်အောင်ပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး - (မကဒတ - ABSDF)
ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတပ်မတော် ဆိုတာကို လည်း ချစ်တယ်။
အန်တီရေ... သမီးက လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို ထောက်ခံသူပါ။
ဒီပို့စ် စတင်ထဲက ဒီကွန်မန့်ရေးဖို့ အလုပ်မှာ ဖြစ်နေလို့ ရေးမရတာနဲ့ ပြန်ရောက်တော့လည်း အိပ်ပျော်သွားတာနဲ့ ခုမှ မအိပ်သေးဘဲ လာရေးရတယ်။
လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ဆိုတာ
စစ်ရေး ကျွမ်းကျင်သူ၊ နိုင်ငံရေး ကျွမ်းကျင်သူလို့လဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မခံယူ ထားပါဘူးနော်။ ဒါပေမယ့် သမိုင်းကို သင်တာ မအ, အောင်လို့ ဆိုတဲ့ ဒေါက်တာ သန်းထွန်းရဲ့ စကားလေး အတိုင်း ကျွန်မက သမိုင်းကိုတော့ ၀ါသနာ ပါတယ်ရှင့်။ အလွတ် ကျက်ဖို့ ၀ါသနာ ပါတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အနောက်တိုင်း ပညာရေး စနစ်တွေ မသင်ခဲ့ ရပေမယ့် ခေတ်မီတဲ့ အဘိုးကြောင့် သမိုင်းကို အိပ်ရာဝင် ပုံပြင်လို သဘောထား နားထောင် ဖတ်ရှု လေ့လာ ခဲ့တဲ့ ကျွန်မပါ။
ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာရော၊ မြန်မာ့ သမိုင်းမှာပါ လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်စေ၊ လူမျိုးရေး လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်စေ လုပ်တဲ့အခါ တော်လှန်ရေး ဆိုတာ ပေါ်ပေါက် လာပါတယ်။ ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး၊ နယ်ချဲ့ တော်လှန်ရေး များဟာ လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပြီး ရုရှ တော်လှန်ရေး ကတော့ လူတန်းစားနဲ့ အာဏာရှင် တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာ ကျွန်မ သွား တွေ့ တာကတော့ တော်လှန်ရေး ဆိုတာ တရားလွန် ဖိနှိပ်မှု၊ မတရားမှု တွေကြောင့်သာ လူထု အုံကြွမှု ကနေ စတင် ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဘယ်သူက မှတော့ အလကား နေရင်း ရန်လိုပြီး လူထု အုံကြွမှု ဖြစ်ရ လောက်အောင် လိုက် လှုံ့ဆော် မနေသလို လူထုကလဲ သူများက လာ လှုံ့ဆော်တိုင်း အားအားယားယား လိုက် တော်လှန် မနေဘူးရှင့်။
ဒါပေမယ့် တော်လှန်ရေးတိုင်းမှာ ခေါင်းဆောင် ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ခေါင်းဆောင် ဆိုသူက ငါက ဒါတွေဒါတွေ သာလို့ ငါ့ကို ခေါင်းဆောင်တင်လို့ ပြောလို့ ၀ိုင်းတင်တာ မဟုတ်သလို သူ့ခါးပိုက်ဆောင် အဖွဲ့က ၀ိုင်းဝါဒဖြန့် ပေးလို့ ခေါင်းဆောင် တင်တာ ခံရလဲ ခဏသာ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး လူထု ခေါင်းဆောင် အစစ်တော့ ဘယ်တော့မှ ဖြစ်မလာ နိုင်တာပါပဲ။ တော်လှန်ရေးတွေမှာ လက်နက်ကိုင်ရခြင်း အကြောင်းကို ကျွန်မ သွားတွေ့ တာကတော့ ဖိနှိပ်သူ ကိုယ်တိုင်က အကြမ်း ဖက် လာတဲ့အခါ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး လုပ်မှ ပြောဆို ညှိနှိုင်းလို့ ရလောက်မယ်လို့ တော်လှန်ရေး သမားတွေ က ယူဆလောက်တဲ့ အထိ ဆိုးရွားလာတဲ့ နှိပ်ကွပ်မှုတွေကြောင့် ဆိုတာ သွားတွေ့ပါတော့တယ်။
နီးနီးနားနား မြန်မာ့ သမိုင်းကြောင်းကို ကြည့်တဲ့အခါ ပဒေသရာဇ် ခေတ်အခါက မင်းဆိုးမင်းညစ်ကို ဖယ်ရှားတဲ့အခါ မင်း လောင်းက လက်နက်ကိုင် တော်လှန် ပုန်ကန်ပြီးမှ နိုင်မှ မင်းအဖြစ် ဘိသိက် ခံရပါတယ်။ မင်းဆိုးမင်းညစ်က တော်လှန် သူကို သူပုန်လို့ သတ်မှတ် တာကိုးးး တော်လှန်ရေးသမား လို့ မသတ်မှတ် ဘူးလေ။ ကိုလိုနီခေတ် မှာလဲ တူတူ ပါပဲ။ လယ်သမား အရေးတော်ပုံကြီး အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲ ခံရတဲ့ အခါ ဆရာစံတို့ လက်နက် စွဲကိုင် သူပုန်ထ ခဲ့ကြတယ်။ မ အောင်မြင်တော့ သူပုန်၊ အောင်မြင်တော့ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ပေါ့လေ။ ဒီအချိန်မှာ နေမ၀င် အင်ပါယာကို ပိုင်စိုးတဲ့ သေနတ်ပိုင်ရှင် အင်္ဂလိပ်ကို ဓား၊ လှံ လောက်နဲ့ ပြန်တော်လှန်တော့ တော်လှန်ရေး မအောင်မြင် ဘူးပေါ့။ အင်္ဂလိပ် အနေနဲ့ ကလဲ မမှုလောက်တဲ့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ဖြစ်နေတော့ မဖြုံဘူးပေါ့။ ဒီတော့ ဖေ၊ ပု၊ ရှိန်တို့ အင်္ဂလန် သွားပြီး အရေးဆိုတာ မအောင်မြင်ပါဘူး။ မလောက်လေး မလောက်စားလို့ ဆက်ဆံ ခံရပါတယ်။
ဒါနဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဘောလ်ပင်ကိုင်တဲ့လက်တွေ ဂျပန်ကိုစွန့်စားထွက်၊ မြန်မာ့သမိုင်းရဲ့ ပထမဆုံး ကျောင်း သား တပ်မတော် ဖြစ်တဲ့ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ကို ဖွဲ့၊ ဘီအိုင်အေ စစ်တပ်ကြီး အဖြစ်နဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို တော်လှန်တော့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်မှာ အင်္ဂ လိပ် ဟာ မြန်မာ စစ်မျက်နှာကနေ ပထမဆုံး စတင် ဆုတ်ခွာ ရပါတော့တယ်။ အဲဒါ မြန်မာ ပါ။ ဒါပေ မယ့် ကတိ မတည် တဲ့ ဖက်ဆစ်က လက်နက် အားကိုး၊ စစ်တပ် အားကိုးနဲ့ လူမဆန်စွာ အနိုင်ကျင့် လာပြန်တော့ ဖက်ဆစ်ကို ပြန်တိုက် ရပါတယ်။ ဖက်ဆစ်ကို တိုက်ခဲ့ အခါမှာ ဖေ၊ ပု၊ ရှိန် တို့လိုတွေ့ဆုံ ညှိုနှိုင်း အရေးဆိုမှုကို မပြု တော့ ပါဘူး။ တခါ ကတိ ဖျက်ပြီးသားလူ နောက်ထပ် ဖျက်ဖို့ ၀န်မလေးပါဘူး။ လူယဉ်ကျေး၊ သမာသမတ် ကျသူ တွေလို သဘောထားပြီး တရားမျှတမှု ရှိစွာ ပြောဆို ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးလို့ မရလောက်တဲ့ လူစားကို တခါတည်း လက်နက်ကိုင် တိုက်ရပါတယ်။
ဖက်ဆစ်ကို တိုက်ရာမှာလဲ လိုအပ်တဲ့ စစ်လက်နက် အင်အားကို ကိုယ်တိုက်ထုတ် ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ် ဆီက ပြန်အကူ အညီ ယူရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အစွမ်းအစကို ခန့်မှန်း ကြည့်ပါနော်။ သာမန်လူဆိုရင် အားနာ၊ မျက်နှာပူ နေမ လား မသိ။ ဗိုလ်ချုပ်ကတော့ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက်ထက် တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေး ရဖို့ ဆိုတဲ့ အများအကျိုး ဦးစားပေး ခံယူချက်ကို ရှေ့တန်းတင်တာများ သူ့အသက်ကိုတောင် မမှု ပါဘူး။
အင်္ဂလိပ်ကိုရော၊ ဂျပန်ကိုပါ လက်ရည်ပြ တိုက်ထုတ် နိုင်တဲ့ တပ်မတော်ရဲ့ အရှိန်အ၀ါ ပံ့ပိုးမှု ကြောင့်သာ နောက်ထပ် လက်နက်ကိုင် တိုက်စရာ မလိုတော့ဘဲ အောင်ဆန်း- အက်တလီစာချုပ်၊ နု-အက်တလီ စာချုပ် စတဲ့ ဆွေးနွေး ညှိုနှိုင်းမှု တွေနဲ့ အတူ လွတ်လပ်ရေး ရလာတာပါ။ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ နောက်မှာ လက်နက်ကိုင် အင်အား မရှိဘဲနဲ့များ ဖိနှိပ် အုပ်ချုပ်သူ နယ်ချဲ့နဲ့ ဖက်ဆစ်ကို သွားအရေးဆို လို့ကတော့ ဟိုက ပြန်အရေး မလုပ်ပေါင်ပါရှင်။
ဒီတော့ ကျွန်မ မြင်တာက လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်လို့ မမြင်ပါဘူး။ ခေတ်အဆက်ဆက် ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်မှာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ပေါ်ထွန်းရတာ ခေတ်စားလို့ မစားလို့ ဆိုတဲ့စကားက ပျံကျ ဆန်လွန်း ပါတယ်။ ကိုယ့်အသက်နဲ့ ရင်းပြီး တော်လှန်ရတဲ့ ပွဲမှာ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရတဲ့ အခြေအနေက အဆိုးရွားဆုံး အကြပ် အတည်းကြောင့်သာ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ တခုတော့ ရှိတာပေါ့လေ။ တောမီးလောင်လို့ တောကြောင် လက်ခ မောင်း ထခတ်ပြီး ဓားပြက သူပုန် ယောင်ဆောင်တာ မျိုးကိုတော့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးလို့ လာခေါင်းစဉ် မတပ်နဲ့ပေါ့။ သည်းညည်း မခံနိုင် လောက်အောင် မတရား ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ် ဗိုလ်ကျ၊ ပြီးတော့ သာမန် အခြေအနေနဲ့ စကားပြောဆို ညှိနှိုင်း ယူလို့ မရလောက်အောင် အကြမ်းဖက် နှိပ်ကွပ် လာပြီ ဆိုရင်တော့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး နဲ့မှသာ (သို့မဟုတ်) လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးက အားကူ ပံ့ပိုး ပေးထားမှသာ အခြေအနေဆိုး တစ်ရပ်အောက်က လွတ်မြောက်အောင် တော်လှန် နိုင်မှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သတိထားရ ပါမယ်။
ဒီနေရာမှာ မတူတဲ့ အခြေအနေကို သွားအတုခိုးလို့လဲ မရနိုင်ပါဘူး။ အိန္ဒိယမှာ ဂန္ဒီရဲ့ အကြမ်းမဖက် မူဝါဒနဲ့ ကျင့်သုံး လွတ်လပ်ရေး ရတာဟာ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ အုပ်ချုပ်ပုံ ကြောင့်ပါ။ အဲဒီနည်းကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ဖက်ဆစ် ဂျပန် ဆီက လွတ်လပ်ရေး ပြန်ယူတဲ့ နေရာမှာ မသုံးပါဘူး။ သုံးမရမှန်း သိလို့ပါ။ လူလို စကားထိုင်ပြော ဆွေးနွေးဖို့ အသာ ထားလို့ တွေ့ရာနေရာမှာ ပါးရိုက်၊ လုယက်၊ ဗိုလ်ကျ နေသူကို ဒီနည်းများ သွားသုံး လို့ကတော့ ခွေးရူးကို မုန့်ကျွေးပြီး လက်ပေးသင် သလိုပဲ ဖြစ်နေ ပါလိမ့်မယ်။
တော်လှန်ရေး တရပ်မှာ အနုနည်း၊ အကြမ်းနည်း၊ ရှိမှန်းတောင် မသိရတဲ့ တံလျှပ်နည်း စသဖြင့် ရှိနိုင်သမျှ နည်းမျိုးစုံ သုံးနိုင်ပေမယ့် လူတိုင်း အခြေအနေပေါ် မူတည်လို့ ကိုယ်အားသန်ရာ နည်းလမ်းကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ ခေတ်စားတဲ့ နည်းလမ်းကို လိုက်တယ် ဆိုတာကတော့ တော်လှန်ရေးသမား မစစ်လို့ လို့ဘဲ ပြောပါရစေ။ တော်လှန်ရေး တစ်ရပ်မှာ ခေတ်အကြိုက် ရေပန်းစား တဲ့ နည်းကို လိုက်တယ် ဆိုတည်းက ခံယူချက် မစစ်မှန်ဘဲ တော်လှန်ရေးကို ခုတုံး လုပ်ပြီး ကိုယ်နာမည်နဲ့ နေရာ ရဖို့ ဦးစားပေးသူ တွေရဲ့ လုပ်ရပ် ဖြစ်နေ လို့ပါ။ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အများအကျိုးကို လိပ်ပြာ သန့်သန့် လုပ်နေ သူများ ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင် အားသန်ရာ နည်းနဲ့ပဲ လုပ်မှာ ဖြစ်လို့ ခေတ်စားတာ၊ ရေပန်းစားတာ တွေကို အရေးလုပ် နေမှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်းပဲ ပြောချင် ပါတယ်။ နောက်တခုက ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းဟာ အစွန့်စား ရဆုံး လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး လမ်းစဉ်ကို ရွေးခဲ့တာ ဦးနှောက် မရှိလို့ အလကား နေရင်း အသက်ကို ရင်းပြီး စတန့်ထွင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခေတ် အခြေအနေ အရ လိုအပ်လို့ တခြားလူ ထအလုပ်ကို မစောင့်နေဘဲ ကိုယ်တိုင် တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် ကြိုးစား လုပ်ဆောင် သွားတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ် မလုပ်ရဲတိုင်း၊ မလုပ်နိုင်တိုင်း အာဇာနည် တွေကို ကိုယ့်အတ္တ နဲ့ နှိုင်းပြီး လျှာစည်းကမ်း မရှိတိုင်း လက်လွတ်စပယ် ရိုင်းရိုင်း ပြောဆို သုံးသပ်ဖို့ မသင့်ပါဘူးရှင်။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု လုပ်တာဟာ ခေတ်စားလို့လဲ မဟုတ် (ခေတ်မ စားခင် အသက်ကို သေမင်းက အချိန်မရွေး စားသွားနိုင်ပါတယ်)။ အားနေလို့ လုပ်တာလဲ မဟုတ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အဖြစ် လူအထင်ကြီး ခံချင်လို့လုပ်တာလဲ မဟုတ် (ဗိုလ်ချုပ် မဖြစ်ခင် ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ဖြစ်စဉ် ကတည်းက ထောင်စော်နံ နေတာပါ)။ တကယ့် အာဇာနည်များ တော်လှန်ရေး လုပ်တာဟာ အများနဲ့ နောင်လာ နောင်သား ကောင်းကျိုး အတွက် ကိုယ်ကျိုး လုံးဝ မဖက်ဘဲ လုပ်တာသာ ဖြစ်ပါကြောင်း သမိုင်းကို သက်သေတည်ပြီး ပြောလိုက် ပါရစေ။
ဒါ့အပြင် ရေရှည် တိုက်ရတဲ့ တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်မှာ သက်လုံ ကောင်းဖို့၊ ရပ်တည်ချက် ခိုင်မာဖို့၊ တော်လှန်ရေး အပေါ်နဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက် အပေါ်မှာ သစ္စာ ရှိဖို့ အလွန် အရေးကြီး ပါသေးတယ်။ တော်လှန်ရေး အောင်မြင်မှု၊ မအောင် မြင်မှု ဆိုတာကတော့ တော်လှန်ရေး လုပ်နေတဲ့ လူတွေထဲမှာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အရည်အချင်းတွေ ခိုင်ခိုင်မာမာ ပြည့်ဝ နေတဲ့သူ အရေအတွက်နဲ့ အရည်အချင်း မပြည့်ဝဘဲ တော်လှန်ရေးရဲ့ အရိပ်မှာနေ အခက်ကိုချိုး လုပ်နေသူ အရေအတွက် ဘယ်လောက် များလဲ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ထိရောက် အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု ဘယ် လောက် ရာခိုင်နှုံး ရှိလဲ ဆိုတာများအပေါ် မူတည်ကြောင်းပါ ရှင်။
အမခင်မင်းဇော်ရေ… ကောမန့် ပွတ်တာ လက်လွန် သွားတာ ဆောရီးပါနော့…
What was she trying to say??? :S
တော်လှန်သည့် သူရဲကောင်းဝါဒ အဓွန့်ရှည်ပါစေ။
လက်နတ်အားကိုးပြီး ရမ်းကားနေတဲ့ လူတွေကို မေတ္တာသုတ် ရွတ်ပြနေလို့ မရဘူး ဒုတ် ဒုတ်ချင်း ဓား ဓားချင်း လှံ လှံချင်း သေနတ် သေနတ်ချင်း ယှဉ်ပစ်မှ ရမယ်..လက်နတ်ကိုင်တိုက်မှ ဒီလိုကောင်တွေကို မျိုးဖြုတ်နိုင်မယ်...
သွေးကြွေးမှာ ဆွေးနွေးစရာ လုံးဝ အကန့် မရှိ
ဒီလို လူမဆန် ယုတ်မာ ပက်စက် ဇကောလောက်မှ ဇောက်မနက်တဲ့ ခွေးတွေကို အဆိပ်လုံးပစ်ကျွေးပြီး သတ်မှ အေးမယ်
သူရဲဘောကြောင်နေတဲ့ သူတွေအတွက် တော်လှန်ရေးမှာ စွန့် သွားတဲ့ သူတွေ ၀ိညာန်တွေက ရယ်သွမ်းသွေးလိုက်မယ် သွေးမပျက်ဘူးဆို လုပ်ကြည့်ပေါ့